Taariikhda SNM iyo Qoraal kooban oo ibraahin maygaag samater ku dhigey taariikhda | Berberatoday.com
Taariikhda SNM iyo Qoraal kooban oo ibraahin maygaag samater ku dhigey taariikhda
August 5, 2016 - Written by berberatoday berberatoday
Ummad waliba waxay leedahay taariikh soo jireen ah oo had iyo jeer haga mustaqbalka bulshada kana duwa gefaf badan oo dhici lahaa. Hadaba in loo hagar baxaa qorista iyo diiwaan gelinta hawshani waa xil qaran .Bahda mareegta farshaxan waxay si sharaf leh uga codsatey Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka SNM, ahna aqoonyahan ku xeel dheer dhaqaalaha,siyaasada ,iwm , mudane Ibraahim Maygaag Samater inuu la wadaago soojireenkii halgankii dib ula soo noqoshada gobanimadii deeqda loo bixiyey ee wadanka Somaliland .Ka dib markii Bahda mareegta farshaxan la yeelatay xidhiidh telefoon ,wuxuu si hagar la’aaneed Mudane Ibraahim ugu soo diray qoraalkan taariikhgalka ah isagoo kaga waramaya halgankaa . Waxaanu mudane Ibraahin (Ilaahay ha ka abaal mariyee) ku bilaabay qoraalkiisa sidan:
Muddo yar dabadeed dadkii abaabulka gudaha ku jiray waxa u muuqatay inay lama huraan tahay in saraakiil loo saaro Itoobiya, si halganku ugu gudbo marxaladda dagaalka hubeysan. Sababo taariikhi ah ayaa go’aakaa qasbay. Waa tii horraantii 1982 kii dhallinyaradii U.F.O la xidhay, xukumay, dabadeedna loo taxaabay jeelasha koonfur. Waa tii dhacdadaasi hurisay gadoodkii dhagaxtuurka ee magaalada Hargeysa.Waxa kale oo isla waqtigaas sii kordhay cadaadiskii ciidamada talisku ku hayey ummadda, kaasoo aan ku koobnayn magaalooyinka laakiin miyigana, siiba koonfurta iyo galbeedka Hargeysa, ay dhib weyn ku hayeen jabhadii talisku sheeganayey inuu u hubeeyey xoreynta Soomaali Galbeed ee aan dadka reer woqooyigu ku jirin. Isla waayhaas waxa kululaaday isku horimadkii dowladd iyo jabhadda SSDF, ee iyana aan dadka reer woqooyigu ku jirin, oo soohdimaha Somalilandna saldhigyo ku lahayd.
Arrimahaas oo dhammi waxay muujiyeen haddaan dhaqdhaqaaqii SNM isu beddelin halgan hubeysan in dadkeedii ku jiriyo ‘irmaan oodan’ oo aan isdifaac lahayn, sahalna ka dhigaya wax kasta oo lala damco. Itoobiyana, dabcan waxay ahayd halka keliya ee hawsha caynkaas ah laga bilaabi karo. Labaadii sarkaal ee ugu horreeyey ee tallaabay waxay ahayeen, Allah ha u naxariistee, Mujaahid Aadan Sh. Maxamed, oo ku magic dheer Aadan Shiine, iyo Mujaahid Axmed Dhagax. Waxa ku xigay, Allah ha u naxariistee, Mujaahid Maxamed Cali. Waxa ku xigay Mujaahid Maxamed Kaahin, oo maanta ah Xoghayaha Guud ee Xisbiga Kulmiye. Intaa wixii ka dambeeyey way iska daba qulqulayeen saraakiisha baxaysay. Mana ahayn wax qof walba goonidii ugu dhashay. Bal wuxuu ahaa arrin qorsheysan oo uu habeeyey unuggii saraakiisha ee gudaha, kuna gacan qabteen xidhiidhadii kale ee dadweynaha, siyaasiyiin iyo dhallinyaraba lahaa, ee aan hore u soo sheegayey.
Markii saraakiishu tallowday, dowladdii Itoobiya ee markaa jirtay way soo dhoweeysay. Waxa ay se ka fileysay inay ku biiraan SSDF oo ahaa ururkii uga horreeyey Itoobiya, taliskii Siyaad Barrena ka horjeeday. Saraakiishii baxday waxay ku wargeliyeen nidaamkii Itoobiya inay ka tirsanyihiin urur kale oo la yidhaa SNM, kuna qanciyeen in madaxdooda siyaasadeed ee London joogta loo gudbiyo fasaxii soo gelitaanka Itoobiya. Sidaa ayaa lajnadii London degganayd ugu soo guurtay Itoobiya, labadii waaxood ee dhaqdhaqaaquna( waaxdii gudaha iyo tii debeddu) isku soo kabmeen, iyadoo mid waliba leedahay taageerayaasheeda. Dabcan dhismahoodu wuu kala duwanaa, iyadoo ay kallifeyso mid walba duruufaheedo. Waaxda debeddu sii fiican bay ugu habeeysnaayeen guddiyo—dalalka Gacanka Carbeed. Ta guduhu se waxay ahayd unugyo sir ah oo hoos ahaan u xidhiidha.
Waxa nasiib wanaag ahaa, oo xusid mudan, in iyadoo marti loo yahay dowladda Itoobiya, haddana jiidda halganku ka bilaabmay (ie. Reserved Area) aanay ahayn dal sidaa qurbe u ah, laakiin yahay meel ururka dadkiisii deggan yahay oo uu sii hagar la’aan u marti geliyey, la dagaal galay, sahleyna xidhiidhkii gudaha ee magaalooyinka lal sameynaayey. Waajibaadka waaweyn ee markaa la beegnaa halgankii waxa ay ahaayeen baraarujintta dadka, gudo iyo debedba, bilowga xarumo dagaal, tababarka dhallinyarada dagaalka soo gelaysa, ama ha ka yimaadaan gudaha amaba jiidaha ha laga qortee, iyo ka-dhaadhicinta qadiyadeena adduunweynaha. Hawalahaa baaxadda weynoo dhanna waxay ahayd in lagu qabto qaab dimoqraadi ah—taaso macnaheedu yahay wada-tashi iyo ka qeybgal buuxa oo dadweynuhu leeyahay. Waxay taa macnaheedu ahaa in jiidaha dagaalka, dadka hawsha ka qayb geliyaa—-hadday tahay xeryo mujaahid iyo odayaal abaabulba— iyagu is habeeyaan oo is-doortaan. Sidaa soo kalena laamaha debeddu iyagu madaxdooda doortaan.Dhismaha caynkaas ahina socdo ilaa madaxda sare. Sidaa saa lagu habeeyey dastuurkii ugu horreeyey ee SNM ee shirweynahii Herar lagu qaatay. Sidaa saa halganka dadkiisu ku yeeshay, naftiisana u huray. Dhaxalka caynkaas ahi waa ka suurtogeliyey nidaamka dimoqraadiga ah ee Somaliland maanta ku dhaqmayso.
Beryahaa dhibihii cuslaa ee SNM la soo beegmay waxa ka mid ahaa cadaadis debedda kaga yimid. Dowladdii Itoobiya ee martida loo ahaa iyo kuwii kale (Yemen iyo Liibiya) ee halganka taageerayey waxay saareen SNM culays weyn inay ku biirto jabhaddii SSDF ee ka soo horrreysay, kana hub badnayd. SNM way ku adkaatay, iyadoo israacii 1960kii ee degdegga-ahaa aan laga macaashin, inay haddana, iyadoo curdin ah, jiritaakeeda u hurto is-raac kale oo aan aayatiinkiisa la garan karin, siiba marka la eego SSDF oo an ku dhaqmayn nidaam dimoqraadiya. Sow, markaa, arrinku noqon mayo: kud ka guur oo qanjo u guur. Iyadoo ka-dhabar-adaygaysa cadaadiskaas waxay SNM ku qancisay dowladihii inay diyaar u tahay wada-hawlgal laakiin isku-darsi iyo isku-milan markay timaad inay si dimoqraadi ah oo aaya-ka-talin ah uga soo go’du xubnaha iyo dadweynaha taageeraya labada urur. Sidaas ayey uga nabad gashay SNM marin-habow, sidaas ayaana asaas u ahayd la-soo-noqoshada madax bannaanidii lagu gaadhay Burco May 1991 kii.
i- Waxa ka mid ahaa hawlahaas dejinta nidaam maamul oo daakhiliya. Iyadoo la hirgelinayo dastuurka dimuqraadiga ee SNM waxa la isku deyey in nidaam maamul oo isku xidha min goobta dagaalka ilaa laanta debedda la dhagan geliyo. Hawshaa baaxadda leh waxna waa ka hirgaleen, waxna wey suurtoobi waayeen. Waxa hirgalay wada jirkii, midnimadii iyo hawlaha had iyo jeer loo wado si wada tashi iyo dimoqraadi ah. Waxa suurtoobi waayey in ciidamadii la isku dhafo oo laga saaro beel-beelnimada. Dadaalku ma yarayn. Dhallinta ciidamada soo geliya waxa la siin jiray tababar mideysan. Waxa weliba la iska deyey, ilaa bilowgiibaa, in loo kala beddelo meelo aan ahayn halkay u dhasheen, si loo helo ciidan halgan oo ka xoreysan beelnimada. Ha yeeshee dadaalkaa ka sokow, danbaa run sheegtay. Mujaahidiinta ururku mushahar uma hayo, dadkaa masruufa. Adiga oo aan waxba siin ayey naftooda u hureen inay ku dhintaan dagaalka. Markaa halka ay kab ay gashadaan ama go’ay huwadaan ka helayaan lagama celin karo. Halkaasina waa halka ehelka ugu dhowi joogo. Lama huraan waa cows jilaal, danina waa seeto ayuu yidhi Ducaale Suldaan.
Waxa dan noqotay, markaa, inaan la filqin awoodda yar, dad iyo maalba, ee aad haysato, oo aad ku dadaasho kordhinta dhumucda halka aad wax ka tari karto oo ah geesta woqooyiga. Tab iyo xeesha(strategy and tactics) waxay isugu jirtay dagaalka gaadmada kooxaha ah iyo mid fool-ka-fool ah ba (combination of hit and run guerilla actions as well as some conventional operations). Dagaalka kooxuhu miyi iyo magaallabo wuu lahaa. Waa la xusuustaa hawlahii ay ka midka ahaayeen madax-furashadii maxaabiista ‘Mandera’ ee dhawrka jeer ahayd iyo dagaalladii baaxadda weynaa ee lagu qaadi jiray ciidamada taliska ee fadhiya xuduudda. Waxay ujeeddadu ahayd in la wiiqo awoodda cadowga dhinac ciidan, isla markiina cabsi lagu geliyo nafsadda (morale) dadka u dagaallamaya amaba si kale ugu adeegaya, la xoojiyo dhiirranida kuwa halganka taageeraya, ilaa inta la gaadheyo dhirbaaxada kama dambaysta ee is-hambo raacinaysa. Gudo-gaalka ‘October-November’ 1984 ee saddax hawlood oo is-daba taxan lagaga galay galbeedka Hargeysa, buuraha Sheekh, iyo bariga Barco, oo taliska ku noqday naxdin iyo werwer, ciidamadiisiina wiiqay, wuxu ahaa tababar ama tijaabo loo sii qaadanayo dhirbaaxadaas u dambaysa. Hawlo badan oo baxaddaas leh oo ay ka mid ahayeen hawlgalkii Hargeysa lagu qaaday madaxda ciidamada amaanka (Axmed Aadan iyo la taliyaashii), markaasoo aan ku-meelgaadh ahaan sii ahaa guddoomiye, ayaa muddo dheer socday ilaayoo uu ka soo galay waqtigii shirweynuhu.
Heshiiskaas labada talis dhex maray colkayagii halganka ku guda jiray kumuu noqon fajiciso. Waannu la soconay saadaasha. Waana loo sii diyaar ahaa. Itoobiya waxay naga codsatay in 15km xaggeeda ciidamada SNM loo soo celiyo. Fursaddaas iyadoo laga faa’iidaysanayo waa tii la isku shubay gudaha. Anigu markaa waxan ku soo noqday hawshaydii ahayd laanta Ameerika. Go’aankaa la qaatay khammaarkiisa wuu laha, waayo xooggeenna iyo ka cadowgu wax isu dhigmayey ma ahayn. Laakiin halkii halganku ka bakhtiyi lahaa waxa laga doorbiday in la badheedho oo gebigiisaba loo wareejiyo gudaha dalka. Jawaabtii taliska iyo wixii ka dhashayna waa la ogaa oo faafaahin uma baahna. Halganka waxay u noqotay macaash weyn. Halki awel SNM ka ahayd wax yaroo kooban, ummaddii gudaha ee soo qaxday oo dhan baa hawshii si buuxda uga qayb gashay. Markan waxay noqotay in dagaalku xadka, buuraha, magaalooyinka hareerahooda ilaa badda, waa meel walba eh, uu ka socdo. Waxay dhalisay in taliskii woqooyiga aanu xukumi karin, koonfurna, ilaa magaalo madaxda, dhaqaalihiisii, siyaasaddiisii iyo nidaam kiisaba khalkhal galo. Waa ta dad badan oo awel aan dhiirran jirin ay dhaqdhaaqeen. Waa ta ay saaxadda dagaalka ku soo biireen ururro kale oo reer koonfureed sida USC iyo SPM, halgankiina aanu maanta keli ku noqon SNM.
Sannadkaas 1989 waa markii koonfurna dhaqdhaqaaqa diidmada talisku xoogeystay. Mudaharaadyada masaajidada iyo suuqyadaba laga dhigay. Xitaa odayadii hore oo uu Madax u yahay Dr. Ismaaciil Jimcaale, waa kuwa bilaabay xarakaddii la magac baxday ‘Manifesto’ ee ku dhiirratay inay Siyaad Barre ku tidhaa xukunka si nabadgelyo ah uga deg intaan daadku ku qaadin. Isna waa ka sii kordhiyey xadhigga iyo cadaadiska, xeebta Jasiirana dhallinyarada ku laayey. SNM waxay kaga jawabtay arrimahaas xoojinta dagaalka hubeysan iyo ka dibloomaasiga ahba. Waa ta is-bahaysi la yeelatay USC iyo SPM, oo ay u suurogashay inay dagaalka manta ka holciso oo ku wareejiso koonfurta. Intaasoo dhammi iyada oo ay socdaan, inna soo gudagel waqtigii shirweynahii caadiga ahaa (kaasoo la qaban jiray 3 dii sannadoodba mar). Markan waxa lagu qabtay magaalo dalka ah oo xoreynsa—Balli gubadle. Waa March 1990kii. Waxa Guddoomiye loo doortay Marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali (Tuur), Anna waxa Golaha Dhexe ee doortay guddoomiyahooda. Hadda ka hor labadaa xil waxa isku hayey hal qof. Waxa la ahaa jabhad dagaal ku jirto oo intii awoodda la ururin karo u baahan. Immika oo neecawdii xorriyaddu inna hayso waxa la yaqiinsaday inay lama huraan tahay in la kala fujiy labada awoodood ee kala ah sharci-dejinta iyo maamul-fulinta. Go’oanka kalee qiimaha weyn leh ee shirweynahaa la gaadhay wuxuun ahaa iyadoo Guurtidii odayada loo aqoonsaday inuu yahay Gole dastuuri ah.
Labadaa tijaababa, in kastoo laga faa’iideystay, haddana may hana qaadin. Sababtoo ah iyadoo dowlad kale marti loo yahay, oo odayada u aragta dadkeedii rayidka ahaa, iyo iyadoo odayadii talada beelaha miisaanka culus ku lahaa weli ku jiraan dalka gudihiisa, taliskii cadowga ahaa hoostiisa. Waxay arrintu innoo hirgashay 1988kii markii dadweynahii magaalooyinku soo qaxay. Waa kuwa odayadii Beesha Isaaqu sannadkaas ku shiray tuulada Caddaroosh, oo ku taal dhinaca koonfur-galbeed ee Hargeysa, iskood isu habeey oo abuuray Golaha Guurtida, Marxuum Sheekh Ibraahim Sheekh Yusuf Sheekh Madarna Guddoomiye u doortay. Waxay odayadu u xeyteen si awoodda dadka oo dhan loogu leylyo halganka hubeysan oo ummadduna dhaqso ugu guryo hoyato. Waxay SNM u arkayeen odayadu dowladdoodii ay waxay soo qabtaanba u hurayeen, amarkeedana u hoggaansanaayeen, isla markaana ay nabadda beelaha kale lala leeyahay iyo sida wax loo wada qabsanyo raadiyaan. Rag aan ku jiraa waxannu ka dhaadhicineynay odayada inay, intaa hore ka sokow, xubnaha SNM u arkaan ilmahoodii u adeegayey, iyaguna odayaal ahaan qayb weyn ku leeyihiin halka dowladnimadu ka soo unkamayso. Sidaas ayey ku asaasmeen laba gole, oo dastuuri ah oo siman—Golahii Dhexe ee SNM iyo Golaha Guurtiga—taladana wadaaga. Waa aragtaan in dhaxal kaasi gun-dhig u noqday dhismaha dimoqraadiyadda ee maanta ka jira Somaliland.